Mapurisa ari kurambidza vezvitoro munzvimbo dzakakwanda munyika kutengesa doro panguva iyo mutungamiri wenyika akatara kuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid19 kana kuti Coronavirus.
Mutauriri wemapurisa, Assitant Commissioner Paul Nyathi, vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri semapurisa sezvo vanhu vakange vave kuwanza kuungana pazvitoro zvakanzi zvivhure mikova yazvo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutenga zvokudya pamazuva makumi maviri nerimwe chete nyika yakavharwa.
Asi danho ratorwa nemapurisa iri rashorwa nevamwe vanwi vedoro vakaita saVaMike Pasipanodya, vanogara mumusha weMabvuku muno muHarare.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, VaDenford Mutashu, vati vari kutambira danho ratorwa nemapurisa iri.
Asi VaNyathi vati vachaongorora kuti matanho avangatore ndeapi kubva zvino zvichienda mberi panyaya yekutengeswa kwehwahwa zvichitevera kugununu'una kuri kwaita veruzhini.
Izvi zvinouyawo apo mumwe mukuru mukambani inobika doro yeDelta Beverages, Amai Patricia Murambinda, vaudza bepanhau repadandemutande reZimbabwe Morning Post kuti kambani yavo yakabvumirwa nehurumende kuti ibike doro sezvo zvainogadzira zviri zvinhu zvinokosha zvikuru uye vatiwo murawo unoti doro harisi kubvumirwa kutengeswa panzvimbo dzekuti munhu anotenga obva anwira ipapo.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakatora matanho ekuvharisa nyika yose kusanganisira mabhawa nedzisvondo senzira yekuti vanhu vasaungane sekukurudzirwa kwazviri kuitwa nevezvehutano mukuedza kurwisa chirwere ichi.
VaMnangagwa vanoti veruzhinji vanofanira kugara mudzimba nguva dzose kusvika vakunda pahondo yekurwisa chirwere ichi vachiti veruzhinji vanofanira kufambira zvinhu zvakakosha chete kwete kuswerombeyera zvinhu zvisina basa zvakanyanya.
Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanodarika zviuru makumi mashanu nezvishanu vafa nechirwere ichi pasi rose kubva zvachatanga uye vanhu vanodarika miryoni imwe chete vakabatwa chirwere cheCovid19 pasi rose.